Ity faran'ny herinandro ity: faran'ny herinandro fanombohana Indianapolis | Martech Zone
Talata, Desambra 2, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Startup Weekend dia hetsika mahery vaika mandritra ny adiny 54 izay mampifandray ireo mpamorona tranonkala manana talenta sy manentana indrindra, mpitantana orinasa, mpanakanto sary, mpampianatra marketing, ary ireo mpankafy startup mba hamoronana orinasa manomboka amin'ny foto-kevitra hatomboka!
Indianapolis dia handray ny hetsika Startup Weekend Event amin'ny 5 Desambra? Faha-7 ao amin'ny Purdue School of Engineering and Technology ao amin'ny campus IUPUI afovoan-tanàna.
Manomboka amin'ny 5 ora hariva ny hetsika ny zoma 5 desambra miaraka amin'ny fifaninanana amboara fiakarana. Avy eo, ny mpandray anjara dia mifidy amin'ireo orinasa tadiavin'izy ireo noforonina ary hivondrona ho ekipa miorina amin'ny fahalianana sy ny fahaiza-manao. Miasa amin'ny orinasany avy ny ekipa mandritra ny faran'ny herinandro ary mifarana amin'ny fampisehoana ny vokatra ny alahady hariva 7 desambra. Ny mpamatsy vola dia tongasoa hanatrika ny famelabelarana farany.
Ho fanampin'ny mpandray anjara, ny faran'ny herinandro Startup dia azo atao amin'ny alàlan'ny fahalalahan-tanan'ireo mpanohana ao amin'ny fiarahamonina eo an-toerana. Ny mpitantana ny hetsika dia mitady mpanohana amin'izao fotoana izao hanampiana amin'ny fandefasana ny vidin'ny fampiantranoana ny hetsika. Raha te-ho mpanohana ianao na te hahalala bebe kokoa momba ny hetsika dia tsidiho ny tranokala amin'ny http://indianapolis.startupweekend.com/.
? Startup Weekend dia toerana tsara tsy hifandraisana amin'ny mpiara-miasa aminao ihany fa hampihatra ny fahaizanao sy ny zavatra mahaliana anao amin'ny sehatry ny orinasa tena izy. Ny faran'ny herinandro Indianapolis dia hahatonga an'i Indiana ho fanjakana voalohany mitazona faran'ny herinandro telo? hoy i Lorraine Ball, filohan'ny Rainmakers ary mpanorina ny Roundpeg Marketing
Startup Weekend, LLC dia miorina any Boulder, Colorado ary manamora ny hetsika isaky ny faran'ny herinandro araka ny nifidianana azy tao amin'ny tranonkalany, http://startupweekend.com/.
Ny hetsika Indiana Startup Weekend teo aloha dia natao tany Bloomington, IN ary West Lafayette, IN. Ny ankamaroan'ny orinasa niforona nandritra ny faran'ny herinandro teo dia nifototra tamin'ny tranonkala ary maro no lasa mpandraharaha mety.
Tags: Guy kawasakiFanapahan-kevitraSocial Media Marketingmpanoratra manara-maso
Fahombiazana amin'ny alàlan'ny tatitra fampiasana mandeha ho azy